Myanmar National Climate Change Policy, Strategy & Action Plan (NCCP and MCCSAP 2017-2030) | Myanmar Climate Change Alliance
Myanmar National Climate Change Policy, Strategy & Action Plan (NCCP and MCCSAP 2017-2030)
We have successfully developed Myanmar Climate Change Strategy & Action Plan (MCCSAP) 2017-2030, six Sectoral Action Plans, as mandated by the National Climate Change Policy we have also developed.
The full final documents will be uploaded as soon as officially adopted. This is expected now in the first quarter.
We hope to be able to officially launch the Policy and the Strategy in March 2018.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံအဆင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း ဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (MCCSAP 2017-2030) သည် နောင်လာမည့် ၁၅နှစ်နှင့် နောက်ပိုင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များနှင့် အခွင့်အလမ်းများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် မဟာဗျူဟာမြောက် တုန့်ပြန်မှုများ ချမှတ်ရာတွင် လမ်းညွှန်မှုပြုမည့် လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မဟာဗျူဟာနှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်သည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အခွင့်အလမ်းများကို တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရာ၌ အမျိုးသားအဆင့်မှ ဒေသအဆင့်ရှိ အဓိကဆောင်ရွက်နေသူများအေနဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာတွင် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍ ပေါင်းစုံဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဖြစ်စေသည့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်းသည့် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဦးတည်သော လမ်းကြောင်းဖြင့် ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်စေရေး လမ်းညွှန်မှုပြုနိုင်မည့် ရေရှည် မျှော်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့အပြင် ကာဗွန်လျှော့ချ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို မြှင့်တင်ရန်၊ အဓိက ဖွံ့ဖြိုးမှုကဏ္ဍများနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဒေသခံများနှင့် အဆိုပါကဏ္ဍများ၏ လိုက်လျောညီထွေတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကို တည်ဆောက်ရန် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ခွဲခြားသတ်မှတ် ဖော်ထုတ်ထားပါသည်။ ထိုမဟာဗျူဟာတွင် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကာဗွန်လျှော့ချ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ စတင်ဆောင်ရွက်မှုများကို အကောင်အထည် ဖော်ရန်နှင့် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်မှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် မူဘောင်တစ်ခုလည်း ပါဝင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအား ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် လိုက်လျောညီထွေစွာ ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်သည့် နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်နှင့် လက်ရှိနှင့် အနာဂတ်မျိုးဆက်များအတွက် ကဏ္ဍ ပေါင်းစုံပါဝင်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် ကာဗွန်လျှော့ချ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို အသုံးချနိုင်သည့် နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်၊
ခြုံငုံရည်ရွယ်ချက် – MCCSAP သည် ကဏ္ဍပေါင်းစုံပါဝင်သည့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိရေးအတွက် အစိုးရနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အိမ်ထောင်စုများကို ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုနှင့် လိုက်လျော ညီထွေရှိပြီး ကာဗွန်လျှော့ချ ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး လမ်းကြောင်းသို့ ဦးတည် တည့်မတ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် – မြန်မာနိုင်ငံသည် အားလုံးပါဝင်သည့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုရရှိရန် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကာဗွန် လျှော့ချ ဖွံ့ဖြိုးမှု လမ်းကြောင်းအတိုင်း၂၀၃ဝခုနှစ်မတိုင်မီ အောင်မြင်စွာရောက်ရှိပါမည်။
ထိခိုက်လွယ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကဏ္ဍများသည် ရာသီဥတုကို လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်နိုင်မည့် စွမ်းရည်ကို တိုးမြှင့်ပေးရမည်။ သို့မှသာ ၎င်းတို့သည် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါမည်။
အလားအလာရှိသော ကဏ္ဍများနှင့် ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းသော တိုးတတ်မှု လျှောက်လမ်း ကို ရောက်ရှိနိုင်ရန်မှာ အခွင့်အလမ်းများကို ပြုလုပ်ပြီးအများဆုံး အကျိုးရှိအောင် အသုံးချရပါမည်။ သို့မှသာလျှင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှု အကျိုးများကို လူ့အဖွဲ့စည်းများနှင့် စီးပွားရေးကဏ္ဍများအားလုံး ရရှိနိုင်ရန်မှာ သေချာမှုရှိပါမည်။ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကဏ္ဍများ
MCCSAP သည် လိုက်လျောညီထွေ တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းကို တည်ဆောက်ပေးရန်နှင့် ကာဗွန်လျှော့ချ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို မြှင့်တင်နိုင်ရန် ကဏ္ဍ(၆)ခုတွင် ဆောင်ရွက်မည့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ် ရလဒ်များ၊ မျှော်မှန်းထားသည့် အကျိုးရလဒ်များကို ဖော်ထုတ်ထားပါသည်။
စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုအတွက် ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် မွေးမြူရေး
ကဏ္ဍအလိုက်ရည်မှန်းချက် – အရင်းအမြစ်ကို ထိရောက်စွာအသုံးချပြီး ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျော့နည်းသည့် နည်းစနစ်များအား တိုးမြှင့်ခြင်း အပါအဝင် စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် မွေးမြူရေးကဏ္ဍများတွင် ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော တုန့်ပြန် ဆောင်ရွက်မှုများကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် လူနေမှုဘဝဖူလုံရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် ဖြစ်ပါသည်။
ကဏ္ဍအလိုက်ရလဒ် – ရာသီဥတုနှင့်သဟဇာတဖြစ်သော တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေ လုပ်ငန်းနှင့် မွေးမြူရေးကဏ္ဍတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ ထိုကဏ္ဍများအပေါ် မှီခိုနေသည့် ဒေသခံပြည်သူများနှင့် အိမ်ထောင်စုများ၏ လူနေမှုဘဝများကို ထောက်ပံ့ပေးရန်နှင့် ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်ဓာတ်ငွေ့ (GHG) လျှော့ချထုတ်လွှတ်မှု အလားအလာကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ကဏ္ဍအလိုက်မျှော်မှန်းထားသည့် အသေးစိတ်ရလဒ်များ –
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကို စိုက်ပျိုးရေး၊ငါးလုပ်ငန်း နှင့် မွေးမြူရေးကဏ္ဍများ၏ မူဝါဒများ၊ စီမံကိန်းများ ၏ မူဝါဒများ၊ စီမံကိန်းများနှင့် ရန်ပုံငွေလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများတွင် ထည့်သွင်း ပေါင်းစပ်ရပါမည်။ ယင်းတွင် လိင်ခွဲခြားမှု ကိစ္စများလည်း ပါဝင်ပြီး၊ ပါဝင်သောသူများမှ ဆောင်ရွက်ရန်။
စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် မွေးမြူရေးကဏ္ဍတို့က ရာသီဥတုနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရေး တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း နည်းပညာများ၊ ရာသီဥတု နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များကို ကျင့်သုံးရန်နှင့် နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်း ရန်ပုံငွေများဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးရန်၊။
အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ရေးနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူ အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေး မူဘောင်တည်ထောင်ရန်၊ ဆန်းသစ်သော စီးပွားရေးနည်းစနစ် မော်ဒယ်များအပါအဝင် စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် မွေးမြူရေးကဏ္ဍတို့တွင် ရာသီဥတုနှင့် သဟဇာတဖြစ်သည့် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအား ကျား၊မ ရေးရာညီမျှမှု နည်းလမ်းဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီပေးရန်၊
ဂေဟစနစ်တည်မြဲရေးအတွက် သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ရေရှည်တည်တံ့စေရန် စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း
ကဏ္ဍအလိုက်ရည်မှန်းချက် – ပတ်ဝန်းကျင်အရင်းအမြစ်များ၊ ဂေဟစနစ်၊ ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲကြွယ်ဝမှုကို ထိန်းသိမ်း မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးကဏ္ဍများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်
ကဏ္ဍအလိုက်ရလဒ် – သဘာဝအရင်းအမြစ်များ၊ ဂေဟစနစ်နှင့် ဂေဟစနစ် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဇီဝမျိုစုံမျိုးကွဲ စသည်တို့၏ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုအပေါ်လိုက်လျောညီထွေတုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့အပေါ် မှီခိုနေသည့် ကဏ္ဍများ၊ ဒေသခံပြည်သူများကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန်၊ ကာဗွန်စုပ်ယှနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ရှုထောင့်များကို ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု မူဝါဒများ၊ ဥပဒေများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင် ထည့်သွင်းရေးဆွဲ၍ ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ရန်၊
ဂေဟစနစ် (သစ်တော၊ ရေ၊မြေ၊ ကမ်းရိုးတန်း) တည်မြဲရေးကိုသာမက ယင်းဧ။် ဝန်ဆောင်မှုများကိုပါ တိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော နည်းပညာများနှင့် ကောင်းမွန်သော စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကို ကျင့်သုံးခြင်း။
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲရန် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ရန်ပုံငွေ ရရှိစေခြင်းတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်မှုနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပါဝင်ဆောင်ရွက် နိုင်သည့် မူဘောင် ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊
စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ကာဗွန်လျှော့ချမည့် စွမ်းအင်၊ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နည်းစနစ်များ
ကဏ္ဍအလိုက်ရည်မှန်းချက် – မြန်မာနိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍတို့တွင် လိုက်လျောညီထွေ တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကာဗွန်လျှော့ချစနစ်ကို အားပေးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရေရှည် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထောက်ပံ့ရန် ဖြစ်ပါသည်။
ကဏ္ဍအလိုက်ရလဒ် – အားလုံးပါဝင်သည့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်သော ကာဗွန်လျှော့ချမည့် စွမ်းအင်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စနစ်များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖော်ထုတ် အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်တွင်းသုံး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးနှင့် အခြားအသုံးပြုမှုအတွက် တိုင်းပြည်၏ စွမ်းအင်လုံလောက်မှုသည် ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များနှင့် သက်သာထိရောက်သည့် စွမ်းအင်များအပေါ်တွင် အဓိကအခြေခံခြင်း။ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး
နည်းစနစ်များသည် ပြောင်းလဲလာ သည့် ရာသီဥတုအခြေအနေသစ်များနှင့် အညီ မြင့်တက် လာသည့် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် လိုက်လျော ညီထွေမှု ရှိသည်သာမက ထိရောက်ပြီး ကာဗွန်ထုတ်လွတ်မှု နည်းသည့် နည်းပညာများဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့ခြင်း။/li>
စက်မှုလုပ်ငန်း နည်းစနစ်များသည် ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည် ရှိသည့်ပြင် ရေရှည်တည်တံ့ကာ ကာဗွန် ထုတ်လွှတ်မှု နည်းပြီး အစိမ်းရောင်စက်မှုလုပ်ငန်း လက္ခဏာများ ရှိခြင်းတို့ကြောင့် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် ပြိုင်ဆိုင်နိုင်စွမ်း မြင့်မားခြင်း။
အများပြည်သူရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ရာသီဥတုဒဏ်ခံသော၊ အားလုံးပါဝင်သော ရေရှည်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်သည့်မြို့ကြီးများနှင့် မြို့များ
ကဏ္ဍအလိုက်ရည်မှန်းချက် – လျင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်နေသော ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ဘေးအန္တရာယ်များ ကို မြို့နယ်များနှင့် မြို့ကြီးများတွင် နေထိုင်သည့် ပြည်သူများ၊ အထူးသဖြင့် ထိခိုက်မှု အလွယ်ဆုံးသူများ အနေဖြင့် လိုက်လျောညီထွေ တုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းကို တည်ဆောက်ကာ၊ ထာဝစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး အားလုံးပါဝင်သော မြို့များ တည်ထောင်သွားရန်ဖြစ်ပါသည်
ကဏ္ဍအလိုက်ရလဒ် – မြန်မာနိုင်ငံရှိ ထိခိုက်အလွယ်ဆုံးသူများအပါအဝင် မြို့နယ်များနှင့် မြို့ကြီးများတွင် နေထိုင်သည့် ပြည်သူများ အနေဖြင့် လျင်မြန်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေသော ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်ပေါ်နေသော ဘေးအန္တရာယ်များမှ လုံခြုံမှုရှိပြီး ထာဝစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး အားလုံးပါဝင်သောမြို့များတွင် နေထိုင်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
မြို့ကြီးများနှင့် မြို့နယ်များတွင် နေထိုင်သူများအား ပြင်းထန်သည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှ အကာအကွယ် ပေးနိုင်သည့် ကြံ့ကြံ့ခိုင်သော အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိစေပြီး ဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်စဉ်နှင့် ကျရောက်ပြီးနောက် ဆက်လက်လှုပ်ရှားရပ်တည်နိုင်ကာ ပြောင်းလဲလာသည့် ရာသီဥတု အခြေအနေသစ်နှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေ အကောင်းဆုံးနေထိုင်နိုင်ရန်၊
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိရေး၊ ကာဗွန်လျှော့ချဖွံ့ဖြိုးမှု၊ လူမှုကဏ္ဍအားလုံးပါဝင်မှု စသည့် အချက်များသည် မြို့ပြစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကကျသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာပြီး လျော့နည်း သက်သာစေရေးနှင့် လိုက်လျော ညီထွေနေထိုင်နိုင်ရေး အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိလာစေရန်၊
အဆောက်အဦ:သစ်များကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတည်ဆောက်ရာတွင် စွမ်းအင်နှင့် သယံဇာတ အရင်းအမြစ် သက်သာ ထိရောက်ပြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် အခြားဘေးအန္တရာယ်များ၏ ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ကာဗွန်ထုတ်လွတ်မှုလျှော့ချရေး၊ စွမ်းအင်ချွေတာရေး၊ အားလုံးတန်းတူ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ရေးနှင့် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာရေး ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
လူထုကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုဘဝအတွက် ရာသီဥတုဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း
ကဏ္ဍအလိုက်ရည်မှန်းချက် – ရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သည့် ဘေးအန္တရာယ်များနှင့် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာများကို တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် စီးပွားရေး ကဏ္ဍများ၏ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကို တည်ဆောက်ရန်၊ ကျန်းမာသော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခု တည်ထောင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
ကဏ္ဍအလိုက်ရလဒ် – မြန်မာနိုင်ငံသည် ရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သည့် သဘာဝဘေးများနှင့် အန္တရာယ်များကို ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်သည့် နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်လာစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်သူလူထုနှင့် ၎င်းတို့၏ လူနေမှုဘဝကို ထိခိုက်နိုင်သည့် ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ထိခိုက်မှုများကို ထိထိရောက်ရောက် တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကဏ္ဍပေါင်းစုံပါဝင်သည့် အမျိုးသားအဆင့် ရာသီဥတု ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်တစ်ခု ခိုင်ခိုင်မာမာ တည်ဆောက်ရန်၊
ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ကြုံတွေ့လာရမည့် ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုများမှ ပြန်လည်ထူထောင်ရန်နှင့် ပြင်ဆင် နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အကာအကွယ်နှင့် ကဏ္ဍာရေးအခြေအနေ တိုးတက်လာရန်၊
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ကျန်းမာရေးပြဿများကို ထိထိ ရောက်ရောက် တုန့်ပြန်ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် ထိခိုက်လွယ်သည့် ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းများကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်မည့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ်အား မြှင့်တင်ရန်၊
လိုက်လျောညီထွေဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိသော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ
ကဏ္ဍအလိုက်ရည်မှန်းချက် – အားလုံးပါဝင်သော ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပြီး ကာဗွန်လျှော့ချ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုနည်းလမ်းများ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရန် ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သည့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် လူသားအရင်းအဖြစ် တည်ဆောက်ရန်။
ကဏ္ဍအလိုက်ရလဒ် – ပညာရေး၊ အသိပညာပေးခြင်း၊ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာများ၏ အထောက်အကူဖြင့် ရာသီဥတုဒဏ် တုန့်ပြန် ဆောင်ရွက် နိုင်သော လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် လူသားအရင်းအမြစ်ကို တည်ဆောက်ရန်။
မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းနှင့် တက္ကသိုလ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများတွင် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေသများ၊ ကာဗွန်လျှော့ချ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဆောင်ရွက်မှု စသည်တို့ကို ရေးဆွဲ ထည့်သွင်းနိုင်ရေးအတွက် ပညာရေးကဏ္ဍတွင်ပါဝင်ဆောင် ရွက်နေသူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တက်လာရန်၊
သုတေသနတွေ့ရှိချက်များ ထွက်ရှိရန်၊ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်စနစ်များ တည်ဆောက် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကဏ္ဍတွင်သာမက ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက် နေသူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တက်လာရန်၊
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကို ရှေးရှုသည့် ပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖြစ်ရေးအတွက် ရာသီဥတုဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးကို ရရှိသုံးစွဲရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ ပါဝင်သည့် မိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်မှုများ မြှင့်တင်ရန်၊
MCCSAP မူကြမ်း လေ့လာဖတ်ရှုပြီး သင်၏ ဝေဖန်အကြံပြုချက်များအား ပေးပါ။